के म रोटीको बारेमा ब्लग गर्न सक्छु? | Martech Zone
के म रोटीको बारेमा ब्लग गर्न सक्छु?
शनिबार, सेप्टेम्बर 23, 2006 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
मैले मेरो दिमाग हराएको छैन।
साँच्चै, म हैन।
हप्ताहरू, सायद महिनाहरू, म रोटीको बारेमा ब्लगिंगको बारेमा सोच्दै छु। यो केवल कुनै रोटी मात्र होइन ... यो सब भन्दा अचम्मको रोटी हो जुन मलाई लाग्छ कि मैले कहिल्यै खाएको छु। म जिस्केको होइन। सुपरमार्केटमा जहाँ ves०० प्रकारका भाँडाहरू अलल्फमा छन्, यो रोटी बाहिर हुँदैन।
यो छ ब्राउनबेरी १२ ग्रेन।
१२ ग्रेनको विशेष मिश्रणले पूरै अन्नको फाइदाको साथ स्वादिष्ट रोटीमा पकाउँदछ र कुनै ट्रान्स फ्याट हुँदैन। - वेब साइटबाट
त्यो वर्णन गर्न पनि नजिक आउँदैन। यो नरम हो ... तर यसकोमा ठूलो साना बिट्स र गहुँको अंश छ। यो यति नरम छैन कि त्यसले आँसु खान्छ वा टाँस्यो वा केही पनि, यद्यपि। यसलाई थोरै माखनको साथ टोस्ट गर्नुहोस् र यो शानदार छ। यो कहिल्यै यति थोरै खैरो खैरो… बाहिर कच्चा, भित्र नरम र स्वादिष्ट। प्रत्येक काटनेको नयाँ स्वाद हुन्छ। Mmmmm।
कहिलेकाँही म आफूलाई ठूलो स्यान्डविच बनाउँछु… टर्की, बच्चा स्विस, सलाद, टमाटर… र यो खाए पछि म दुखी छु कि अन्य सबै सामग्रीहरूले रोटीको स्वाद स्मोरेट गरे।
यदि तपाईं आफैले यो रोटी किन्न खोज्नु भयो भने, होशियार! त्यहाँ अन्य "१२ ग्रेन" ईम्पोस्टरहरू शेल्फमा छन्। तिनीहरू आफैंले प्याकेज पनि गर्छन्… तर तिनीहरू चूस्छन्! तस्वीर याद गर्नुहोस्, नाम सम्झनुहोस्, रोटी किन्नुहोस्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं यस पोष्टबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई माफ गर्नुहोस्। तिनीहरूले मलाई तिर्दैनन् (यद्यपि म केही रोटी स्वीकार्दछु)। म चाँडै नै मेरो सामान्य सामग्रीमा फर्किन्छु ... तर अबको लागि, म ब्राउनबेरी १२ ग्रेन रोटीको टुक्रा ... टोस्ट ... माखनको साथ पाउनेछु।
स्पाम सुरक्षाको साथ WordPress सम्पर्क फारम
हम्म, प्रभाव र स्वचालनमा - एक मार्केटिंग र टेक्नोलोजी ब्लग; विषय ब्राउनबेरी १२ ग्रेन रोटी हां शनसँग सहमत हुनुपर्दछ, तपाईंको दिमाग हरायो।
अर्को नोटमा, यद्यपि मैले त्यो खास रोटीलाई कहिले देखेको छैन, यसको कारणको एक अंश यो हो कि मसँग रोटीको मेशीन छ, र वास्तवमा यसलाई प्रयोग गर्छु। म इस्पातकोट ओट्स, साथै उत्कृष्ट र बिभिन्न पिज्जा क्रसट्सको प्रयोग गरी मह ओटमल रोटी बनाउँदछु।
हे बग्गर, मैले थप परिवर्तन गर्न बिर्सें, र अब यो टिप्पणी पोस्ट गर्न मलाई लाग्दैन जस्तो देखिन्छ यसले मलाई यो पहिले नै पोष्ट गरेको हुनाले।
मानिस, के तपाईंले बटरमा किशमिश रोटी प्रयोग गरेर हेर्नु भएको छ? अब त्यो राम्रो रोटी 😀
सेप्टेम्बर 24, 2006 मा 8: 36 AM
म माखन व्यक्ति होइन। अब पनीर फैलियो (क्रीम चीज) र जाम, मलाई थाट्स!
दुध रोटी मेरो मनपर्ने छ, टाढाबाट!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 25::2006० अपराह्न
... हम्म, के तपाईंले कहिल्यै दक्षिणी जर्मनीको सानो बेकरीबाट ताजा, हातले पकाएको रोटी प्रयोग गर्नुभएको छ?
वा सानो फ्रान्सेली गाउँमा ताजा, तातो सामान?
तपाईले फेरि कहिल्यै पनि प्लास्टिकले बेर्ने, औद्योगिक रोटीलाई छुनु हुँदैन।
कस्तो ठूलो ट्रिभिया प्रश्न! १२ अन्नको पीठमा १२ अन्नहरू के हुन्?
LOL… .म यो रमाईलो लाग्छ। म नेटमा छु १२ कोठाको रोटीको लागि राम्रो रेसिपी पत्ता लगाउन। म नेब्रास्का मा यहाँ एक महान पाउन सकेको छैन। एक हप्ता पहिले क्यानाडा भ्रमण गरेपछि र डेम्पस्टरको १२ धान्य रोटी प्रयोग गरेर ... हामी यसको साथ पागल महसुस गर्दछौं। त्यसोभए ...। यदि कोहीले एक विधि फेला पार्छ भने, कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद! नीना
यदि तपाईंलाई आफ्नो रोटीको लागि यसमा परीक्षकको आवश्यकता छ भने, मलाई एक रोटी पठाउनुहोस्। म हरेक नुस्खा धेरै ध्यान दिएर रेट गर्नेछु! Mmmmmm।
मार्क्स 1, 2007 मा 1: 24 PM
ब्राउनबेरी १२ ग्रेन ब्रेड - यदि तपाईं आज कुनै पनि रोटी प्याकेजमा हेर्नुहुन्छ भने, हरेक ब्रान्ड सुविधाहरू, अमेरिकी कृषि विभाग? को खाना गाइड पिरामिड।
के प्याकेजहरू उल्लेख गर्न असफल हुन्छ कि केहि रोटी तपाईंको लागि अरु भन्दा राम्रो हुन्छ। न त उनीहरूले बुझाउँछन् कि ती छ देखि एघारौं सिफारिस गरिएको सेवाहरू साना हुन्छन्: केवल १ / २ कप कप वा चामल वा रोटीको एक सानो टुक्रा। तपाईं डन्किनबाट केवल एक ब्यागेलमा चार सर्विंगहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? डोनट्स।
जुन २,, २०१ बिहान :16:२२ बिहान
"डग्लसकेयर.कट। द्वारा संचालित वर्डप्रेस र ब्राउनबेरी १२ ग्रेन रोटी" 😀
त्यो रक हुनेछ, साँच्चै 🙂
डग, तपाईं केहि पनि बारे मा लेख्न सक्नुहुन्छ, रोटी सहित (होईन कि म यो विशिष्ट प्रकारको किन्न सक्छु जहाँ म बस्दछु ;-) ... मैले यस पोष्टको आनन्द लिएँ ...
राम्रो लेखन जारी राख्नुहोस्! 🙂
(पहिलो पटक तपाईंको ब्लग भ्रमण गर्दै)